၉ တန်းကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ မိဘများ ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်...။ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / ၉ တန်းကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ မိဘများ ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်...။
၉ တန်းကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ မိဘများ ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်...။
Apann Pyay 11:11 PM ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
မိန်းကလေးတယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် … သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က ....
.ထမင်းစားချိန် ဆိုင်သွားဖို. ဖြတ်လမ်း ကြား ကနေ အဖြတ် ကိုးတန်း ကလေး မိန်းကလေး ငါးယောက် ကို တယောက် စီ ကောင် လေး လေးငါးယောက် လောက် က တွဲပီး လမ်းလျောက်လာ ကြတာ တာတွေ.လိုက်တယ်… မိန်းကလေး တွေ ခြေလှမ်းက ယိမ်းယိုင်နေပီးတော့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျောက်နိုင်ကြတော့ဘူး .. မိန်းကလေးတယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် … သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က အစာ အဆိပ်သင့်တာပါလို. လွယ်လွယ်လှမ်းပြော ပီး သူတို. က ဆက်သွားကြပေမဲ့ စိတ်ထဲ စိတ်မချဖြစ်တာနဲ. ကား ကို ဘေးချရပ် ပီး သူတို.နောက် ကိုယ်တွေ ရုံးက အဖွဲ. လေးယောက်လိုက်ကြတာ …